Annie Trippah - ဖင်လန်အတွက်ဖန်တီးမှုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Aneta Atsova က၎င်း၏ဂီတကလောင်အမည် Annie Trippah များအတွက်လူသိများသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသူမ၏နေအိမ်မြို့ကနေဒေသခံတစ်ဦးဒဏ္ဍာရီသူမ၏အမည်အားပေးတော်မူ၏။ ဟုတ်ပါတယ်, ကြှနျမနောက်ပိုင်းတွင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကသူတစ်နေရာရာအခြားခဲ့လျှင်အဖြစ်သူမအမြဲသလိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမည်ပြောင်သူမ၏ပေးခဲ့ကြောင်းသူမ၏သို့ပြောသည်။
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များအတွက်ဂီတ compose - ဂျက်ဇ်, drum'n'bass ထွက်လည်ပတ်။ ငါဂီတတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း၏စိတ်ကူးမွေးဖွားဘယ်လို, စိတ်ဝင်စားလဲ?
ဒါကဆိုးဆိုးရွားရွားရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်ချောမွေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်လှုံ့ဆော်မှုတွေ့ရခဲသောတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ငါ့လောကီယုတ္တိဗေဒကိုနားမထောင်ပါဘူး။ ကျွန်မအနုပညာထိတ်လန့်အတွက်အဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိမှထင်ရှားသောကွောငျ့ငါထိတ်လန့်ခြင်းမရှိဘဲ, တခြားနေရာကိုငါ့အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်သောအခါပစ္စုပ္ပန်ကခံစားအခါပျက်ကွက်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာဘာမှပေမယ့်တိကျတဲ့ပရိသတ်ကိုရည်ရွယ်တစ် coded စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်မှု, ဆက်သွယ်ရေးဘာသာစကားတစ်ခုကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကိုယ်နှိုက်အတွက်အဆုံးသတ်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဗီဇအတိုင်းကျေနပ်ဖို့ယန္တရားဖြစ်လာသည့်အခါတစ်ဦးကိုသနားသည်။ ဤသည်မှာအများအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှုထောင့်တစ်ဦးကျဆင်းမှုခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ အဘယ်သို့ငါသတိထားမိကြပါပြီငါ့အစိတ်ကူးများအရေးပါသောအရာတစ်ခုခုကို၏ရှည်လျားသောဆင်းရဲချို့တဲ့ပြီးနောက်မွေးဖွားနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
တစ်နေ့မှာတစ်ခုခုချောင်ချိုး, ငါသည်အထွက်ဆူညံအော်ဟစ်ချင်တစ်ခုခု ... ထိုအခါငါဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်ဖြစ်လာနှင့်သင့်လျော်သောဘာသာစကားရှာပါ။ အကယ်. မရဂီတ, ကပန်းပု, ပန်းချီဖြစ်လိမ့်မည်။
တခါတရံငါထို့နောက်ငါ Krushovene များ၏ရွာအကြောင်းကိုငါ့အတိုတောင်းသောဇာတ်လမ်းထဲကယူ, စကားလုံးများ၏ဘာသာစကားကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါ "မတော်တဆမှုများအတွက် Notebook ။ " ဒါဟာအမည်ရှိဒါဟာငါနှစ်အနည်းငယ်အတွက် "အဆောက်အဦ" ဖြစ်ရပြီငါသောနေရာများနှင့်ငါ့ကလေးဘဝ၏ဖြစ်ရပ်များပှေါညှိုးနွမ်းရှေ့မှာအလင်းထံသို့လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်သောငါ၏လျှို့ဝှက်ချက်အချိန်စက်ဖြစ်ပါသည်။
Wikimedia Commons ကနေတဆင့် Mahlum (ကိုယ်ပိုင်အလုပ်) [ပြည်သူ့ဒိုမိန်း] by
သငျသညျ 8 နှစ်ပေါင်းဖင်လန်တှငျနထေိုငျပါပွီ။ ဖင်လန်ဘယ်လိုလူမျိုး၏ဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်ဖို့သူတို့ရဲ့သဘောထားကိုကဘာလဲ?
ဖင်လန်တစ်အုံထဲမှာပျားပုံနဲ့တူတဲ့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးအအေးလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ သင်တန်း၏, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်မခြောက်နှစ်များအတွက်ဖင်လန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ဖို့ဂုဏ်အသရေနဲ့ကျွန်မကောင်းသောခံစားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက, သင်ကသီချင်းဟယ်လ်စင်ကီထဲမှာရေဒီယိုဘူတာရုံအားဖြင့်ထိုရက်သတ္တပတ်၏သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များနှင့်သင်ဂျူရီများကအဘယ်အရာကိုမှတ်ချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါကဘာလဲရှိသနည်း
ငါပြပွဲအစီအစဉ်ကိုရေဒီယို "ဟယ်လ်စင်ကီ" ပေါ်တွင် "တစ်ပတ် Demo" ငါ့အိမ်ကစတူဒီယိုထဲမှာလုပ်သီချင်း, တစ်သရုပ်ပြစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ငါအများအားဖြင့်ဝေဖန်မှုများမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနားမထောင်ခဲ့ပေမယ့်သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေများဂျူရီအလွန်ဟန်ဆောင်ကြောင်းပြောတယ်ခဲ့သည်။ ငါ (ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းလွန်း bemused ဖြစ်သကဲ့သို့ကံမကောင်း, ငါ, အခြားသင်တန်းသားများကိုမဆိုများ၏အမည်များကိုမှတ်မိကြဘူး) ကို5သရုပ်ပြသီချင်းများရဲ့ပထမဦးဆုံးအပြီးသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုကြားရတဲ့အခါ, ငါ့အမြင်အတည်ပြုခဲ့သည် - သူတို့ဖြစ်သလိုပဲ ပဲဝေဖန်သူများအဘို့အခိုင်ခိုင်လုံလုံရှာကြံ။ သီချင်းတွေစတိုင်ကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်, သူတို့ထဲကအများစုဟာ, ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်စတူဒီယိုတှငျမှတျတမျးတငျထားသ, သံသယရှိသူ။ ငါသီချင်းဆိုမယ့်အတန်းအတွက်တတိယကြီးနဲ့ကျွန်မပြီးသားငါ့အကံကြမ္မာအဘယ်သူမျှမကွဲပြားပါလိမ့်မယ်သိတယ်။ သို့သော်အံ့ဖွယ်အဖြစ်ပျက် - သူတို့သီချင်းကိုကြိုက်တယ်နှင့်သူတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဖို့ဘယ်လိုမသိခဲ့ပါလျှင်အဖြစ်ပထမဦးဆုံးမှာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်အစီအစဉ်အတွက်အသံ, အသီချင်းစာသားနှင့်အနည်းငယ်မျှသာကြိုက်တယ်။
ငါဘူလ်ဂေးရီးယားကျန်ရစ်သည်အထိငါဂီတနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အလေးအနက်ထား start ခဲ့ပါဘူး။ ငါသည်ငါ့မိဘများ၏နှစ်ဦးစလုံး၌သင်္ဂြိုဟ်ဆင်းရဲသားများနှင့်ဖှယျကလေးဘဝရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတစ်ပြိုင်နက်တခါတရံနှစ်ခုသောနေရာများမှာတစ်ခုအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကတည်းကအလုပ်လုပ်ရတယ်။ ထိုအခါတက္ကသိုလ်ကိုလည်းထိန်းညှိရန်လွယ်ကူမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဂီတနှင့်အတူသိမ်းပိုက်တဲ့ငါ့ကလေးဘဝအိပ်မက်အဲဒီအခြိနျမှာကြှနျတေျာ့တည်ရှိဘို့လည်းဇိမ်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနှစ်ပေါင်းငါ့ကိုဖြတ်ခဲ့သောမေးခွန်းများအဖြေတစ်စုံတစ်ဦး၏ပြင်ပအခွင့်အာဏာထဲကနေလာလိမ့်မည်ဟုသောနုံယုံကြည်ချက်နှင့်အတူဒဿနလှည့်။ ဒါကအနောက်တိုင်းအစဉ်အလာကိုအသှနျအရာဖြစ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, တူဘာမျှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒဿနဘွဲ့ရပြီးနောက်ကျနော်အကြိမ်ရာပေါင်းများစွာကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။
ငါအသစ်ကရာစုအစအဦးမှာမသေချာမရေရာ facing ခဲ့သည်အပြင်ဘက်တခါ, အ 90s ၏ obscurantism ကြုံတွေ့ဘဲလျက် ...
"! တက်တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း" ထိုအခါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါလူတိုင်းဒါပေမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူအနည်းငယ်ကောင်းသော-နုတ်ဆက်ပါတယ်ငါ၏အကလေးဘဝအိပ်မက်မှ said: ဘဝကအဆက်မပြတ်ငါ့နားထဲမှာတီးတိုး, ငါ့ကိုလှည့်ဖြားရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ "သင်သင်သည်အဘယ်သူထင်လဲ ?!"
ငါဟယ်လ်စင်ကီထံသို့ လာ. ငါ၏အမူလတန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုအစွန်းရောက်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုနှင့်အတူ, အနုပညာများအတွက်တောငျ့မှတဖန်ဤအချိန်မြင့်တက်အပ်ပေးတော်မူ၏။
ငါ့အသက်ကိုပေါ်မှာမူတည်ပါလျှင်သကဲ့သို့ငါ, ပန်းချီစတင် Logic Express ကိုလေ့လာနေ။ ဤသူကားငါ၏ပထမဦးဆုံးရေးစပ်သီတဖြည်းဖြည်းဒီလောကသို့ရောက် လာ. ပုံဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းကာလကိုတစျဆငျ့ငါတော်တော်များများစီမံကိန်းများကိုခဲ့ - သုံး, Duo, ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးငါသည်ငါ့ဗီဇအတိုင်းမှဟုတ်မှန်, တစ်ဦးတည်းဆက်လက်လိုအပ်သော ပို. ပို. ခိုင်ခံ့အသိအမြင်တွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
youself သင့်ရဲ့ဇာတိမြေ၌တူညီသောလမ်းအတွက်ကိုဆိုပါစို့။ ခြားနားချက်ကဘာလဲဖြစ်ပါ့မလား
မပြောတတ်ဘူး။ တကယ်တော့ငါကဒီကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူး။ ဘူလ်ဂေးရီးယား၌ငါ facing ခဲ့သည်တစ်ခုတည်းသောပြဿနာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်ဒုက္ခဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါကဒီမှာငါမှီခို၏ပဉ္စမနှစ်တွင်တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောလွမ်းဆွတ်မှုခံစားခဲ့ရပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ... အံ့သြဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု, သံသယရှိကြသည်။ ဒါဟာငါပိုကောင်းမည်သည့်ဖော်ပြချက်ထက်ငါ့တိုင်းပြည်နဲ့ငါ့ရှုပ်ထွေးဆက်ဆံရေးဟာရောင်ပြန်ဟပ်သောအောက်ပါကဗျာကိုရေးသားခဲ့သည်ကြောင်းထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ၏အအနုပညာမှာတော့ငါပျောက်အဓိပ္ပာယ်ကို, ယုံကြည်ခြင်း, Self-လေးစားမှုရှိခြင်း, စိတ်ပျက်အားငယ်၏ချောက်ကမ်းပါးပေါ်ကလူဖြေရှင်းရန်။
များသောအားဖြင့်ငါလွင်ပြင်စာသားထဲမှာ addressing ထက်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်နှင့်မြင်သာထင်စကားရပ်၏အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့အကြံပြုချက်များ၏လမ်းကြောင်းကိုရှာအံ့သောငှါ, ဒါပေမယ့်အောက်ပါအတိုင်းစကားများ၏ဘာသာစကားကိုအတွက်, ငါ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုအသံမယ်လို့:
"သင်ဦးတည်ချက်မဆုံးရှုံးရင်တောင်လမ်းလျှောက်ရပ်တန့်မနေပါနဲ့။ အားလုံးလမ်းများကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှဦးဆောင်လမ်းပြ။ "
Annie Trippah အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
အသံတိမ်တိုက်ပေါ် Annie Trippah
Facebook ပေါ်မှာ Annie Trippah
အတတ်ပညာ, ဖန်တီးမှု, ဖင်လန်, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, ဂီတ, အသစ်ကဂီတ | | rating:5/ 30